ကလေး Predator က Nathaniel ဘား-ယောန၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
က Nathaniel ဘား-ယောနထပ်တလဲလဲ၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခံရပြီးနောက် 130 နှစ်ထောင်ဒဏ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားကလေးကအသားစားခဲ့ molesting , နှိပ်စက်နှင့်ကလေးများသတ်ရန်ကြိုးစားနေ။ သူလည်းကလေးတစ်ဦးသေဆုံးကာထို့နောက်မိမိအသတိမရှိသောအိမ်နီးချင်းများပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း cannibalistic နည်းလမ်းတွေမှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွန့်သံသယခဲ့သည်။
က Nathaniel ဘား-ယောန Worcester, မက်ဆာချူးဆက်တွင်, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 1957 ရက်တွင်ညျဒါဝိဒျသညျပေါလုဘရောင်းမွေးဖွားခဲ့သည်။
အဖြစ်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခုနစ်ခုအဖြစ်, ဘား-ယောနညံ့သညျ့အတှေးအချေါမြားနှငျ့အကြမ်းဖက်မှုများပြင်းထန်ဆိုင်းဘုတ်များသရုပ်ပြခဲ့သည်။ 1964 ခုနှစ်တွင်, သူ့မွေးနေ့တစ်ခု Ouija ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ဘား-ယောနသည်သူ၏မြေအောက်ခန်းသို့ငါးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဖျားယောင်းနှင့်သူမ၏လည်ပင်းထညှစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူ့မိခင်အော်ဟစ်သူငယ်ကိုကြားနာပြီးနောက်ကြားဝင်။
1970 ခုနှစ်တွင် 13 နှစ်အရွယ်ဘား-ယောနလိင် sledding သူ့ကိုယူကတိပေးပြီးနောက်ခြောက်လနှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်စော်ကား။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတစ်ဦးသင်္ချိုင်း၌နှစျယောက်ျားလေးများသတ်စီစဉ်ထားပေမယ့်ယောက်ျားလေးသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဝေးတယ်။
အသက် 17 နှစ်မှာဘား-ယောနဟာရဲများနှင့်ရိုက်နှက်မှုအဖြစ်ဆေးထည့်ခြင်းနှင့်သူသည်မိမိကားကိုသို့အမိန့်ချမှတ်သူရှစ်နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်မွန်းကျပ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်အပြစ်ရှိ pled ။ ရိုက်နှက်မှုပြီးနောက်ထိုသူငယ်ဒေသခံတစ်ဦး McDonalds မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘရောင်းအသိအမှတ်ပြုသူကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ ဘား-ယောနသည်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စမ်း၏တစ်နှစ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်ဘား-ယောနသည်နောက်တဖန်တစ်ဦးရဲအဖြစ်ဝတ်ဆင်နှစ်ယောက်ယောက်ျားလေးများပြန်ပေးဆွဲ, သူတို့ကိုသုတ်သင်လုပ်, ပြီးတော့ သူတို့ကိုစေ့ညှစ်သတ်စတင်ခဲ့သည် ။
အဆိုပါယောက်ျားလေးများတစ်ခုမှာရဲလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အာဏာပိုင်များဘရောင်းနှင့်အခြားကလေးကမိမိအစည်အတွင်း၌လက်ထိပ်ခတ်, တည်ရှိသောခဲ့သည်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဘား-ယောနကြိုးစားခဲ့လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုကာ 20 နှစ်ထောင်ဒဏ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အကျဉ်းစဉ်တွင်ဘား-ယောနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Predator များအတွက် Bridgewater ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးမှဘား-ယောနကျူးလွန်ရန် 1979 ခုနှစ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏အစိတ်ရောဂါနှင့်အတူလူသတ်မှု, ခှဲစိတျနှင့်လူသားစားသူ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အချို့ shared ။
ဘား-ယောန Superior တရားရုံးတရားသူကြီး Walter ဟာအီးသံမဏိပြည်နယ်သူအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခဲ့သကျသပွေရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လာသောအခါ 1991 ခုနှစ်, သည်အထိဆေးရုံတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘား-ယောနသူတို့ Montana မှရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်းသူ၏မိသားစုကနေတရားရုံးတစ်ခုဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းထားခဲ့တယ်။
မက်ဆာချူးဆက် Montana ဖို့ပြဿနာစေလွှတ်
ဘား-ယောနသုံးပတ်ကသူ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးနောက်အခြားကောင်လေးတစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးစွဲချက်အပေါ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်, ဒါပေမယ့်အာမခံခြင်းမရှိဘဲလွှတ်ပေးခံရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသဘောတူညီချက်ဘား-ယောန Montana အတွက်သူ့မိသားစုကို join ကြောင့်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူလည်းနှစ်နှစ်စမ်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဘား-ယောနသည်သူ၏စကားလုံးထားရှိမည်နှင့်မက်ဆာချူးဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ပြီးတာနဲ့ Montana အတွက်ဘား-ယောနသည်သူ၏စမ်းအရာရှိနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်သူ၏အတိတ်ပြစ်မှုအချို့ထုတ်ဖော်။ တစ်ဦးကတောင်းဆိုမှုကိုဘား-ယောန၏သမိုင်းနှင့်စိတ်ရောဂါအတိတ်နှင့် ပတ်သက်. ပိုပြီးမှတ်တမ်းများပေးပို့ဖို့မက်ဆာချူးဆက်စမ်းရုံးစေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းမှတ်တမ်းများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဘား-ယောနသူတစ်ဦးရဲအဖြစ်ဝတ်ဆင်နှင့် Stun သေနတ်နှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန်ရေမွှားသယ်ဆောင်, ဂရိတ်ရေတံခွန်, Montana အတွက်မူလတန်းကျောင်းအနီးတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အခါ 1999 သည်အထိကွာရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှနေဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသူ၏နေအိမ်တွင်ရှာဖွေယောက်ျားလေးများနှင့်မက်ဆာချူးဆက်နှင့်ဂရိတ်ရေတံခွန်ကနေဖြစ်ဘူးသောသူယောက်ျားလေးရဲ့အမည်များစာရင်းတစ်ခု၏ဓာတ်ပုံများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်း '' ကလေးလေးအိုး pies 'နည်းနည်းကောင်လေးစွပ်ပြုတ်' 'ကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်များပါဝင်သည်သော FBI ကဝှက်စာဝှက်ထားတဲ့အရေးအသား, အဝတ်မခြုံဘဲ' နဲ့ 'နေ့လယ်စာလှော်ကလေးကအတူဟင်းလင်းပြင်အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ ' '
အာဏာပိုင်များဘား-ယောနကျောင်းကိုသူ၏လမ်းအပေါ်ပျောက်ကွယ်တဲ့သူ 10 နှစ်အရွယ်ကို Zachary Ramsay ၏ 1996 ပျောက်ဆုံးတာဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူယုံကြည်ခဲ့သည် ပြန်ပေးဆွဲ သူတစ်ဦး cookout မှာသတိမရှိသောအိမ်နီးချင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းစွပ်ပြုတ်နှင့်ဟမ်ဘာဂါအဘို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ဖြတ်ထို့နောက်ကလေးနှင့်အသတ်ခံရ။
ဇူလိုင်လ 2000 ခုနှစ်တွင်ဘား-ယောနကို Zachary Ramsay ရဲ့လူသတ်မှုနဲ့ပြန်ပေးဆွဲများအတွက်တရားစွဲဆိုနှင့်လိင်တစ်ဦးတိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးအတွက်သူ့ကိုအထက်နေသောသုံးခုကတခြားယောက်ျားလေးတွေတိုက်ခိုက်ရန်ခဲ့သည်။
ကောင်လေးကရဲ့မိခင်သူမကဘား-ယောနသည်မိမိသားဦးသေဆုံးပြီးမယုံဆိုပါတယ်ပြီးနောက် Ramsay ပါဝင်သောအဆိုပါစွဲချက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ အခြားစွဲချက်အဘို့, ဘား-ယောနလိင်တဦးတည်းယောက်ျားလေးတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်မီးဖိုချောင်မျက်နှာကျက်ကနေသူ့ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြင့်အခြားနှိပ်စက်ထောင်ဒဏ် 130 နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2004 ခုနှစ်, Montana တရားရုံးချုပ်ဘား-ယောန၏အယူခံပယ်ချခဲ့ခြင်းနှင့်ခံယူချက်နှင့် 130 နှစ်ထောင်ဒဏ်ထောကျခံခဲ့။
ဧပြီလ 13, 2008 တွင်, က Nathaniel ဘား-ယောနသည်သူ၏အကျဉ်းခန်း၌သေရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအသေခံသည်သူ၏ကျန်းမာရေးချို့တဲ့၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည် (သူ 300 ပေါင်ကျော်အလေးချိန်) နှင့်သေခြင်း၏အကြောင်းရင်း myocardial infarction (နှလုံးရောဂါ) အဖြစ်စာရင်းခဲ့ကွောငျးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Susan Atkins ခေါ် Sadie မဲ Glutz
အဆိုပါမာသ Stewart ကဖြစ်ရပ်မှန်
Circumstantial အထောက်အထား: အဆိုပါဖြစ်သူ Scott Peterson စမ်းသပ်
အဆိုပါဆယ်စုနှစ်အတွင်း celebrity ပြစ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်
သင် "Thrones ၏ဂိမ်း" Watch သင့်သငျသညျ, ထိုစာအုပ် Love?
မျိုးရိုးဗီဇပဟေဠိ: Mendelian မျိုးရိုးဗီဇ
New Orleans Soul ကဘာလဲ?
'' ရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလားလက်ပံ '-' 'ရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလား 28' '၏ Cast ကိုတွေ့ဆုံ
Lamma သမိုင်း: အရိတ်သိမ်းကြိုဆိုခြင်း
တစ်ဦး High School တွင်ဒီပလိုမာမရှိရင်ကောလိပ်မှ Go
တစ်ဦးစားပွဲတင်တင်းနစ် ROOM တွင်မီးထွန်း
အားလုံးပါဝင်နိုင် 'ငါတို့' (သဒ္ဒါ)
တစ်နှစ်တာ၏ PGA Tour လူသစ်
ကော်လိုရာဒိုကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်
ဂေါက်သီး Single-အရှည်သံအကြောင်းကိုသိရန်အဘို့အ 8 အရာ
အကောင်းဆုံးဘာသာစကားများနှင့်ဘာသာပြန်စာပေ Apps ကပ၏ 16
ကျနော်တို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းကြားဘယ်တော့မှမဒါကစကားရဲ့ 20 ပုံ *
အပူပိုင်းရေခဲပြင်ဆိုတာဘာလဲ - ရေးစပ်သီကုံးမှု, ကြန်အင်လက္ခဏာများနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ရယ်စရာ Donald Trump ရုပ်ပုံများနှင့်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
ယောဟနျသ Steinbeck ၏ 'ကြွက်တွေကလူ' 'ကနေ quotes
တစ်ခုသင်လက်ငင်းပြီးရင်တော့ Make လိမ့်မည်ဒါက 10 ROFL ရယ်စရာအကောင်းဆုံး Quotes
သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ '' မေတ္တာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြင်နာလူနာ Is ''
ယင်းကြိယာ "Helfen" Conjugate လုပ်နည်း (ကိုကူညီပါရန်)
လက်တင်မတ်ေတာသီချင်း Playlist ကို
ဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်အကြားတွင်ရှင်းပြအပြန်အလှန်, သို့မဟုတ် 'အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်များ,'
Drawing များတွင် '' လိုင်း '' ဆိုတာဘာလဲ